NYI LYNN SECK 18+ DEN: ရွှေမန်းတင်မောင် ဘယ်တုန်းကသေ?
မေး - ရွှေမန်းတင်မောင် ဘယ်တုန်းကသေ?
ဖြေ - ၁၉၉၆ မှာသေ
ဪ သိပ်မကြာသေးပဲကိုးလို့ စိတ်ထဲက ဖြစ်များ ဖြစ်သွားကြလား မသိဘူး။ အဲဒီအဖြေက ကျွန်တှော ပေးတဲ့ အဖြေမဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျား။ ဒါဖြင့် ဘယ်သူပေးတဲ့ အဖြေလည်း ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
၁၉၆၉ ခုနှစ် ပွဲဦးထွက်အဖြစ် မနဿတလေးမြို့တွင် ဂီတစွမ်းအင်(လောကနတ်) သရုပ်ဖှောအကကို၎င်း၊ ပညာပေး ဇာတ်လမ်းအဖြစ် ဒေဝဓမဿမ ဂီတသရုပ်ဖှော ဇာတ်လမ်းကို၎င်း၊ နောက်ပိုင်းအဖြစ် စာပေအရသာ အပြည့်အဝဖြင့် ဆက်တင်သစ်များဖြင့် တင်ဆက်ကပြခဲ့သည်။ သို့သှော ထိုအရသာသစ်များကို ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်အောင် မယူဆောင်နိုင်တော့ပဲ အထက်မင်းလှ လက်ပံရွာ၊ မဟာပိနဿနဲ ဘုရားပွဲတင် သုံးညဉ့်မြောက် ကပြနေခိုက် ၁၃၃၁ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျှော ၅ ရက်နေ့ (၂၉-၁၁-၉၆) ညဉ့်တွင် ဇာတ်ကရင်းပင် မူလရှိရင်းစွဲ သွေးတိုးရောဂါ၏ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုကို ခံရ၍ ရုတ်တရက်သတိမေ့ သွားရာမှ သရက်မြို့ဆေးရုံသို့ ယူအသွား ဆေးရုံမရောက်မီ တန်ဆောင်းလမုန်း လပြည့်ကျှော ၆ ရက်နေ့ (၃ဝ-၁၁-၉၆) နံနက် ၄ နာရီ အချိန်တွင် ကွယ်လွန်သွားလေသည်။ ရွှေမန်းတင်မောင်၏ ရုပ်အလောင်းကို မနဿတလေးမြို့ နေအိမ်သို့ သယ်ဆောင်ပြီးလျှင် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ကျှော ၁ဝ ရက် (၄-၁၂-၉၆) ၁၁ နာရီတွင် မနဿတလေးတောင်၏ အရှေ့ဘက် အုတ်စက်သုသာန်၌ သဂြဿငိုဟ်သည်။ ရွှေမန်းတင်မောင်တွင် ပထမဇနီး ဒှေါသိန်ညွးန့်နှင့် သားလေးယောက်၊ သမီးသုံးယောက် ကျန်ခဲ့၍၊ ဒုတိယဇနီး ဒှေါစိန်မေနှင့် သမီးသုံးယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ သည်။ သားအကြီးဆုံး မောင်ညွန့်ဝင်းသည် ရုပ်ရှင်နယ်တွင် အောင်မြင်နေသည့် အကယ်ဒမီရ မင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်၍ ကျန်သားဖြစ်သော မောင်ဝင်းဗိုလ်နှင့် မောင်ဆန်းဝင်းတို့သည် ဖခင်၏ ဇာတ်ကို ဆက်လက်ဦးဆောင် ကပြလျက်ရှိလေသည်။
အထက်ကဟာက မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း စီဒီရွမ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ရွှေမန်းတင်မောင် ကွယ်လွန်ချိန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဖတ်လိုက်မိကတည်းက တစ်ခုခု မှားနေပြီဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တှော သိထားတာ ရွေမန်းတင်မောင်ဟာ ကျွန်တှော မမွေးခင် ၁၉၈၀ မတိုင်ခင် ကတည်းက ဆုံးပါးသွားတယ်လို့ အဖွား ခဏခဏ ပြောဖူးလို့ သတိရနေတယ်။ အခုတော့ ဒီအထဲမှာ ၁၉၉၆မှ သေတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်နေတယ်။ အမှန်က ၆၉ ဖြစ်ရမှာ။ မြန်မာသကဿကရာဇ် ၁၃၃၁ဟာ ခရစ်နှစ် ၁၉၆၉နဲ့ အတူတူပါပဲ။ အဲဒါကို ၆၉နဲ့ ၉၆ မှားရေးပစ်လိုက်ကြတာ။ ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ မူရင်း စာအုပ်ထဲမှာတော့ မှားမယ် မထင်ဘူး။ ကွန်ပျူတာ စာရိုက်တဲ့လူတွေ မှားကြတာ ဖြစ်မယ်။ ပြန်ပြီးတော့ စစ်ဆေးကြပုံလည်း မပှေါဘူး။ စာရိုက်တဲ့ ကောင်ကလည်း ဒီလောက်လေးတောင် ဗဟုသုတ မရှိဘူး။ ဒီစွယ်စုံကျမ်း စီဒီရွမ်ထဲမှာ အမှားတွေမှ အများကြီးပဲ။ စာလုံးပေါင်း အမှားတွေလည်း ဒင်းကြမ်းပဲ။ တစ်ခါတုန်းကလည်း ဒီအထဲမှာပဲ အဆိုတှော တစ်ယောက်အကြောင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ သူဟာ ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက ဓာတ်လုံးရ အဆိုတှော တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့လေသည် ဆိုတာကြောင့် မျက်စိလည်ခဲ့ ဖူးသေးတယ်။ ဓာတ်ပြား မတိုင်ခင် ဓာတ်လုံးဆိုတာ ရှိသေးလားလို့တောင် ကိုယ့်ဘာသာ သံသယ တှောတှော ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။
အဲဒီစွယ်စုံကျမ်းစီဒီ လုပ်ထားတာက တှောတှောလေး ညံ့ဖျင်းတယ်။ Interface ကလည်း မကောင်းဘူး။ User Friendly ဖြစ်သလား ဆိုတော့လည်း သိပ်မဖြစ်။ Searching ကျတော့လည်း အတွင်းပိုင်းတွေကို ရှာမပေးနိုင်။ ခေါင်းစဉ်လေးတွေလောက် Index လုပ်ထားတာမျိုး။ မြင်ကွင်းကလည်း အားမလို အားမရ။ အမှားတွေကလည်းများ။ အင်း ခေတ်မီမီ အဆင့်ရှိတဲ့ အသစ်တစ်ခု ပြန်လုပ်သင့်နေပြီ။
ကိုးကား။ ရွှေမန်းတင်မောင်၊ လူထုဒှေါအမာ။
Posted by NLS at 1/01/2009 09:44:00 AM
Labels: Biography, Knowledge, Selection
No response to “ရွှေမန်းတင်မောင် ဘယ်တုန်းကသေ?”
MJOY: Free Text Messages to any Mobile Phone
Myanmar Ban Blogspot Again
ရှေးဟောင်းလူ နှင့် ဝက်သား
Blogger and Blogspot are unbanned in Myanmar
Historical Photos of Myanmar
နှစ်၁၅ဝပြည့် မနဿတလေး စာအုပ်
Share January 08, 2009